साहसिक पर्यटन र प्रकृतिसँग रमाउन बोर्डरल्याण्ड | गृहपृष्ठ
Home Uncategorized साहसिक पर्यटन र प्रकृतिसँग रमाउन बोर्डरल्याण्ड
साहसिक पर्यटन र प्रकृतिसँग रमाउन बोर्डरल्याण्ड
एकै प्रकारको जीवनशैली तथा शहरी भीडभाडपूर्ण जिन्दगीमा केही नयाँपन चाहनुभएको छ ? वा पदयात्रा तथा साहसिक पर्यटनका लागि केही समय दिने निधो गर्नुभएको छ ? अहिलेको व्यस्त शहरी तथा व्यावसायिक जीवनमा नयाँपन दिनका लागि केही दिन प्रकृतिसँग रमाउनु मनमस्तिष्क मात्र होइन, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि आवश्यक बन्दै गएको छ ।
यसरी आफ्नो जीवनमा नयाँपन खोज्ने र पदयात्रा तथा साहसिक पर्यटनमा रम्न चाहनेहरूका लागि सिन्धुपाल्चोकको गातीस्थित बोर्डरल्याण्ड रिसोर्ट उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ । लोभलाग्दो प्राकृतिक छटाको बीचमा रहेको खुला रिसोर्टले धेरैको मन लोभ्याउँछ । पराल र टिनका छानाभित्र बस्ने सामान्य टेण्ट । टेण्टभित्र बाँसका आरामदायी खाट । शहरको रहनसहनभन्दा भिन्न छ यहाँको वातावरण । राजधानीबाट ३ घण्टाको दूरीमा रहेको बोर्डरल्याण्डबाट दक्षिणी तिब्बत नजिकै छ । साहसिक यात्राका लागि परिचित बोर्डरल्याण्डमा गाउँको रमाइलो वातावरण पाउन सकिन्छ । रिसोर्ट छेउमै रहेको भोटेकोशीको छङछङ आवाजले यहाँ आउने जोसुकैलाई पनि आनन्दित तुल्याउँछ । हालसम्म बोर्डरल्याण्डमा आन्तरिकभन्दा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढी रहेको रिसोर्ट बताउँछ । यसले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पनि टेवा पुर्याउँदै आएको छ ।
पारिवारिक वातावरण बोर्डरल्याण्डको अर्को विषेशता हो । कुनै पनि देशका नागरिक वा जुनसुकै व्यवसायको भए पनि तपाईं यहाँको वातावरणमा छिट्टै घुलमिल हुन सक्नुहुन्छ । सबै पर्यटक एकैसाथ चकटीमा पलेंटी मारी खाना खाँदा कुनै भोजको सम्झना आउँछ ।
रिसोर्ट नेपालको पहिलो साहसिक पर्यटनको केन्द्र पनि हो । र्याफ्टिङ र क्यान्योनिङ गर्नेहरूको चिच्याहटले हेर्नेलाई पनि बेग्लै आनन्द दिन्छ । भोटेकोशीमा र्याफटिङ र क्यान्योनिङ गर्नु आफैमा पनि चुनौती हो । यस्ता चुनौतीपूर्ण खेलका लागि यहाँ अनुभवी गाइडको व्यवस्था गरिएको छ, जसले तपाईंलाई आवश्यक तालीम र सुरक्षा विधिका बारेमा बताउने मात्र होइन, तपाईं कुनै दुघटना वा अप्ठयारोमा परे तत्काल उद्धार पनि गर्छन् । छहरामा गरिने क्यान्योनिङको सुरक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । छहरामा डोरीका माध्यमबाट क्यानोनिङ गर्दै गरेकी डेनमार्ककी सोनी भन्छिन् ‘यो जीवनकै उत्कृष्ट क्षण हो । डरसँगै अनुभव हुने रमाइलो निकै आनन्ददायक छ ।’
बोर्डरल्याण्डले रिसोर्टबाट पैदल यात्राको पनि व्यवस्था गरेको छ । पैदल यात्रामा रिसोर्टबाट भैरवकुण्ड र दुग्नागणी जान सकिन्छ । भैरवकुण्ड तीर्थस्थल जान चाहनेहरूका लागि रिसोर्टमा बस्ने दिनसहित गरेर सात रात र आठ दिनको प्याकेज रहेको छ । दुग्नागणीका लागि भने पाँच रात र छ दिनको पैदल यात्रा प्याकेज रहेको छ । यस रिसोर्टमा नेपाली र विदेशीको जमघट देख्न सकिन्छ ।
ठमेलस्थित बैङ्क अफ काठमाण्डूको भवनमा रहेको बोर्डरल्याण्ड्स ग्रूपको कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने । त्यसपछि कम्पनीले जिम्मा लिन्छ ।
नेपाली पर्यटकका लागि बोर्डरल्याण्डमा एक रात एक दिनको २ हजार १ सय रुपैयाँ ।
भोटेकोशी र्याफ्टिङ एक दिनको २ हजार ८ सय रुपैयाँ ।
क्यान्योनिङ एक दिनको ३ हजार रुपैयाँ ।
जनशक्ति विकासका लागि तालीम छैन
पहिलो विज्ञापन छापिएको डेढ सय वर्ष र एजेन्सी स्थापनाको ५० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाली विज्ञापन क्षेत्रमा जनशक्तिको समस्या यथावत् छ । यसबीचमा विज्ञापन एजेन्सीको सङ्ख्या ४ सयको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । जसमध्ये १ सय ६८ नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन)सँग आबद्ध छन् । तर, यही अनुपातमा जनशक्तिको विकास भने हुन सकेको छैन । नेपालमा विज्ञापनका लागि औपचारिक शिक्षा तथा तालीम दिने संस्थाको अभाव रहेको सम्बन्धित व्यवसायी तथा विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपालमा विज्ञापनका क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ । ‘क्रिएटिभ तथा ग्राफिक डिजाइनिङका लागि जनशक्तिको समस्या व्यापक नभए पनि ‘कपी लेखक’को ठूलो अभाव छ । विशेष प्राविधिक ज्ञान भएकाहरू पाउन त झनै गार्हो छ,’ प्रिज्मा एडभर्टाईजीङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जित आचार्य बताउँछन् । ग्राफिक डिजाइनरको माग विज्ञापनगृहबाहेक प्रकाशनजस्ता अन्य उद्योगमा पनि हुने भएकाले त्यसको जनशक्ति पनि पर्याप्त उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ ।
आचार्यको भनाइसँग आनका पूर्वअध्यक्ष निर्मलराज पौडेल पनि सहमत छन् । ‘क्रिएटिभका क्षेत्रको माग ललितकला क्याम्पस तथा डब्ल्यूएलसी कलेजबाट पढाइ पूरा गरेकाहरूले पनि धानिरहेका छन् । तर, एडभर्टाईजीजङ र मिडिया मार्केटिङका लागि जनशक्तिको ठूलो अभाव छ,’ उनी भन्छन् । प्रमोर्टस नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीपी तिमल्सेना भने विज्ञापन उद्योगका सबै क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भएको धारणा राख्छन् । क्रिएटिभ क्षेत्रमा विदेशी प्रोफेशनलहरू पनि प्रशस्त भएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको विज्ञापन उद्योगमा प्रत्यक्ष ३ हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा १० हजारले रोजगारी पाएको आचार्यले जानकारी दिए । आउँदो २ वर्षभित्रमा यसमा ४ देखि ५ सय दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने पौडेल बताउँछन् ।
नेपालमा उपलब्ध शिक्षा तथा तालीम
नेपालमा विज्ञापनका लागि नै भनेर छुट्टै पढाइ हुने गरेको छैन । पछिल्लो समयमा केही निजी संस्था तथा क्याम्पसले यससम्बन्धी तालीम भने सञ्चालन गर्न थालेका छन् । नेपाली विश्वविद्यालयले हालसम्म पनि विज्ञापनको अध्ययन अध्यापनलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् । नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पत्रकारिता तथा आमसञ्चारमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा जनसम्पर्क तथा विज्ञापन गरी दुई विषय पढाउँदै आएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा भने यी दुवै तहमा विज्ञापनको १ सय पूर्ण्ााङ्कको एउटा विषय समावेश गरिएको छ ।
हालसम्म नेपालमा उपलब्ध विज्ञापनको उच्च तहको अध्ययन अध्यापन गराउने एकमात्र शैक्षिक संस्था डब्ल्यूएलसी (विगेन एण्ड लेह कलेज) हो । दक्षिण एशियाकै ठूला कलेजमध्ये एक मानिने भारतको डब्ल्यूएलसीको शाखाका रूपमा काठमाडौंमा ४ वर्षअघि यसको स्थापना भएको हो । डब्ल्यूएलसी नेपालले ‘डिप्लोमा इन भिजुअल कम्युनिकेशन’ र ‘पोष्ट ग्य्राजुएट डिप्लोमा इन एडभर्टाइजीङ’ गरी दुई तहका कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । दुईवर्षको अवधिका यी कोसअन्तर्गत एनिमेशन, आर्ट डाइरेक्शन, फोटोग्राफी, फिल्म प्रोडक्शन, सम्पादन, ग्राफिक डिजाइनिङ, टेलिभिजन विज्ञापन कपी राइटिङ, विज्ञापन क्याम्पेनलगायतका विषयको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक शिक्षण हुने कलेजकी काउन्सिलर मिरा विष्ट बताउँछिन् ।
आनले १५ दिने तालीम सञ्चालन गरिरहेको छ । वर्षको चारपटक आयोजना गरिने यो तालीममा विज्ञापनका बारेमा आधारभूत ज्ञान दिइन्छ । दश जोड दुई पास भएकाले लिन पाउने यो तालीमका अधिकांश विद्यार्थी विज्ञापन एजेन्सीमा काम गरिरहेका हुने गरेको आनका मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ नारायण नेपाल बताउँछन् । तालीममा ग्राहक सेवा तथा मार्केटिङलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
काठमाडौंस्थित एक निजी संस्था इन्पिmनिटी नेपालले पनि ‘मिडिया मार्केटिङ एण्ड एडभर्टाइजीङ करीयर’का नाममा दुईमहिने तालीम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तालीममा विज्ञापन, नेपाली मिडिया, विज्ञापन एजेन्सी, क्लाइण्ट केयर, कपी तथा प्रपोजल लेखनजस्ता विषयको ज्ञान दिइने इन्फिनिटीका अध्यक्ष डा. भोजराज अर्याल बताउँछन् । इन्फिनिटीले निकट भविष्यमै ग्राफिक डिजाइनिङको तीनमहिने तालीम सञ्चालन गर्ने उनले जानकारी दिए । राजधानीकै शेर्फड कलेजले पनि आनसँगको सहकार्यमा तीनमहिने तालीम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
ग्राफिक डिजाइनिङमा त्यत्ति ठूलो समस्या नभएको एजेन्सीहरू बताउँछन् । मायाजस्ता तालीम केन्द्रदेखि डब्ल्यूएलसीजस्ता कलेजसम्मले ग्राफिक डिजाइनिङको तालीम तथा पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, छोटो समयको तालीममा आधारभूत कुराको ज्ञान मात्र दिन सकिने भएकाले यसलाई पनि अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता एजेन्सीहरू औंल्याउँछन् । विज्ञापन उद्योगका लागि औपचारिक शिक्षाभन्दा प्राविधिक तालीम दिने संस्थाको आवश्यकता देख्छन् प्रिज्माका आचार्य । ‘त्यस्ता संस्थामा रुचि भएकाहरूले सिक्न पाउँछन् । प्राविधिक पक्षको व्यावहारिक ज्ञान लिएकाहरू बजारमा छिटो बिक्ने पनि भएकाले त्यसको सम्भाव्यता बढी छ,’ उनी भन्छन् ।